nepaldoor.com: यस्तो देखियो एमाओवादीको विस्तारित वैठक
साउन ६– प्रचण्ड शक्तिशाली
काठमाडौं (नेपालडोर) । एकीकृत माओवादीको विस्तारित वैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ले प्रस्ताव गरेअनुसार र नेता डा. बाबुराम भट्टराईले चाहे अनुसार एकल नेतृत्व प्रणाली पारित गरेको छ । आगामी संविधानसभा निर्वाचनपछि आयोजना गर्ने विशेष राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म दाहाल नेतृत्वको एकल हेडक्वार्टर हुनेछ भने हेटौंडा महाधिवशेनपछिका अन्य पदाधिकारीहरु केन्द्रिय सदस्यमात्रै भएका छन् । अध्यक्ष दाहालले पुर्व पदाधिकारी समेटेर सचिवालय गठन गर्ने भएका छन् । सदाझैँ यसपटक पनि एमाओवादीले विस्तारित वैठकको निर्णय पार्टीको बिजय, पार्टी विरोधीहरुको पराजय भनेको छ । आफू झगडा गर्ने एमाओवादीका नेताहरुले वैठक सकिएपछि आफूहरुले जितेको र बिरोधीहरुले हारेको भनेका छन् ।
ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा ४ साउनदेखि बसेको वैठकले केन्द्रिय सदस्य र सल्लाहकाहरुलाई गाउँ गएर पार्टीका पक्षमा चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने जिम्मेबारी दिएको छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना केन्द्रिय सदस्य वा सल्लाहकारको नेतृत्वमा अभियान सञ्चालन हुने पार्टी प्रबक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार नेताहरुलाई गृह जिल्ला वा क्षेत्रबाहिर जिम्मेबारी दिइएको छ । पहाडका नेतालाई तराईमा र तराईका नेतालाई पहाडमा गएर चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइएको पनि सापकोटाले जानकारी दिए । तर अध्यक्ष दाहालसहित निवर्तमान पदाधिकारीलाई क्षेत्र तोकेर चुनावी अभियानमा नखटाउने वैठकको निर्णय छ ।
विस्तारित वैठकको अन्तिम दिन आइतवार निवर्तमान महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीले आगामी निर्वाचनसम्मका लागि दाहालको नेतृत्वमा पार्टी एक ढिक्का हुने भन्दै एकल नेतृत्व प्रस्ताब गरेका थिए । उनको प्रस्ताबमा वैठकमा सहभागीले ताली बजाएर समर्थन गरेको हो ।
दाहालको एकल नेतृत्वको प्रस्ताव सर्वसम्मतीबाट पारित भएपछि अब उनी पार्टीमा पुनः एकल हेडक्वार्टर भएका छन् । २०६६ साल असार अघि एमाओवादीमा एकल नेतृत्व प्रणाली थियो । तर तत्कालीन नेताहरु मोहन बैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठहरुको पहलमा पार्टीको नेतृत्व बहुपदीय कायम भएको थियो । विस्तारित वैठकमा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो प्राधिकार वा एकल नेतृत्व नहुने जानकारी दिए । ‘पार्टीको महाधिवेशनले पारित गरेअनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष पद हुनेछ, तर निर्वाचनसम्म अध्यक्षको नेतृत्वमा एकढिक्का भएर पार्टी अघि बढ्छ’ दाहालले विस्तारित वैठकको अन्तिम दिन सम्बोधन गर्दै भने, ‘निर्वाचन भइसकेपछि राष्ट्रिय सम्मेलनबा नयाँ संगठनात्मक पद्दतिको विकास हुन्छ र नयाँ ढंगले हामी अघि बढ्छौँ ।’
विस्तारित वैठकले निवर्तमान उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र महासचिव बोगटीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । अर्का उपाध्यक्ष भट्टराई आफैँले पदत्याग गरिसकेका छन् । उनको पदत्यागको शैलीप्रति वैठकले आलोचना गरेको छ ।
असारको दोस्रोसाता राजधानीमा आयोजित केन्द्रिय समिति वैठकमा अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको पदीय भागबण्डाको प्रस्ताबमा विरोध आएपछि भट्टराईले पदत्याग गरेका थिए । उनको पदत्यागपछि पार्टीले आयोजना गरेको विस्तारित वैठकले दाहालको एकल नेतृत्व प्रणालीमा पार्टीलाई प्रवेश गराएको छ । विस्तारित वैठकमा सहभागी नेताहरुको १६ समूहमध्ये अधिकांशले दाहालको एकल नेतृत्व प्रणाली स्थापित हुनुपर्ने मत दिएका थिए । प्रचण्डको प्रस्तावमा छलफल गर्न बनाइएका १६ वटै समूहले प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए ।
‘केन्द्रिय समिति, सल्लाहकार समितिका सबै साथीहरु अब गाउँगाएँमा जाने र माओवादी आयो है भनेर जनतालाई जागरुक बनाउन लागेका छौँ’ समापनमा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘एकमहिने अभियान अन्तरगत जनतास“ग जोडिने, जनताका समस्याहरु बुझ्ने र पार्टीलाई गतिशील बनाउने निर्णय गरेका छौँ । यो आफैँमा एउटा धक्कामूलक निर्णय हो ।’ दाहालले निर्वाचनमा पार्टीको पूरै तागत लगाउने र माहौल सिर्जना गर्ने पनि वैठकमा बताए । ‘हामी माओवादी फेरि आयौं, माओवादी आयो भन्ने जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ’ दाहालले भने, ‘हामी भेडा होइनौँ, सिंहका सन्तान हौँ भनेर देखाउने बेला अब आएको छ ।’
साउन ५– दाहालको समर्थन, भट्टराईको आलोचना
विस्तारित वैठकमा अधिकांश नेताले नेताले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको एकल नेतृत्व प्रणालीसम्बन्धी प्रस्ताब समर्थन गरे । बैठकमा बोलेका अधिकांशले अनुपयुक्त समयमा उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पदत्याग गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरे । तर अध्यक्षको एकल नेतृत्वमा मात्रै पार्टी एकढिक्का हुने भन्दै दाहालको समर्थन गरे । असन्तुष्टिमाझ नेतृत्वलाई सहयोग गर्न उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीले पदबाट शुक्रवारै राजीनामा दिइसकेका छन् ।
‘उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र महासचिव बोगटीले शुक्रवार विहान बसेको पार्टी शीर्ष नेताहरुको वैठकमा राजीनामा दिइसक्नुभएको थियो, अध्यक्षको प्रस्ताबलाई समर्थन गर्ने गरी वैठकबाट धारणा आएपछि शनीवार राजीनामा सार्वजनिक गरियो’ प्रचण्ड निकटस्थ एक नेताले नेपाल डोर डटकमलाई बताए । शनीवार वैठकपछि एमाओवादी प्रबक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि श्रेष्ठ र बोगटीको राजीनामा आएको पुष्टि गरेका छन् ।
तर प्रचण्डको नेतृत्वमा एकल नेतृत्व हुनुपर्ने बहुसंख्यक सहभागीको प्रस्ताबमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठ सन्तुष्ट छैनन् । ‘महाधिवेशनले गरेको निर्णय उल्ट्याउन विस्तारित वैठकले सक्दैन भन्ने उहाँको धारणा छ, अहिले केबल अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहयोग गर्नका लागि उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो’ श्रेष्ठ निकट एक केन्द्रिय सदस्यले भने ‘बाबुरामजीले पदत्याग गरेपछि उहाँ(श्रेष्ठ)लाई पदलोलुप आरोप लाग्न थाल्यो । त्यसकारण पनि उहाँले राजीनामा दिनुबाहेक विकल्प रहेन ।’
विस्तारित वैठकमा दाहालले शुक्रवार पेश गरेको पाँच बुँदे अबधारणापत्रमाथि शनिबार १६ वटा समूहमध्ये १४ समूहले समर्थन गरेको थियो । दुईवटा समूह नेताले भने भट्टराईले बेमौसममा पदत्याग गरेको मार सबैमाथि परेको र पार्टी महाधिवेशनको निर्णय बिपरीत चल्न लागेको टिप्पणि गरेका थिए । अधिकांशको समर्थन आएपछि दाहालबाहेक सबैजना केन्द्रिय सदस्य रहने निश्चितप्राय भएको पार्टी स्रोतको भनाई छ । ‘अध्यक्षको प्रस्ताबमा सबैजसोको समर्थन छ, उपाध्यक्ष र महासचिवको राजीनामा आइसकेको छ’ एमाओवादी स्रोतले भन्यो, ‘आइतवार अध्यक्षको प्रस्ताब सर्वसम्मतरुपमा पारित हुन्छ ।’ विस्तारित वैठकमा सहभागी करिब पाँच सय जनालाई १६ समूहमा विभाजन गरी सबै समूहले धारणा राखिसकेको छ । आइतवार दाहालले जबाफ दिएपछि उनको प्रस्ताब पारित हुने स्रोतले बतायो ।
शनीवार बोल्ने सबैजसो टोली नेताले नेता भट्टराईलाई पदत्याग फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर अध्यक्षवाहेक पदाधिकारी नै खारेज हुने भएपछि भट्टराईलाई आग्रह गर्नुको केही अर्थ नहुने उनी निकटस्थ नेताको तर्क छ ।
प्रचण्डको पाँचबुँदे विशेष सांगठनिक प्रस्ताबमाथि टिप्पणि गर्नेहरुमा सेतीमहाकाली ब्यूरोबाट रेणु चन्द, भेरी कर्णालीबाट सुरेश पहाडी, थारुवान राज्यसमितिबाट जगप्रसाद शर्मा, मगराँतबाट समरसिंह, तमुवानबाट हरि अधिकारी, अवधबाट कमल चुदारी, भोजपुराबाट अंजना बिशंखे, ताम्सालिङबाट हितबहादुर तामाङ, किरा“तबाट सुरेशकुमार राई, लिम्बूवानबाट टंक आङबुहाङ, मजदुर मोर्चाबाट शालिकराम जमर्कट्टेल, अन्तर्राष्ट«िय ब्यूरोबाट युवराज चौलागाइ“ र सल्लाहकार परिÈद्बाट नन्दकुमार प्रसाईं छन् ।
साउन ४– एकल नेतृत्व प्रस्ताब
एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तारित वैठकको बन्दशत्रमा संविधानसभा निर्वाचनसम्मका लागि ‘एकल नेतृत्व प्रणाली’को प्रस्ताव गरे । पदत्याग गरेका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको जिद्धिपछि प्रचण्डले पदाधिकारी नै नरहने गरी तत्काल आफू शक्तिशाली हुने प्रस्ताव पेश गरे । संविधानसभा निर्वाचनपछि पार्टीको विशेष राष्ट्रिय सम्मेलन गरी सांगठनिक समस्या हल गर्ने गरी तत्काल चुनावी कार्यविभाजन गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताब थियो । प्रचण्डले पेश गरेको पाँच बुँदे राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रस्ताब ४ साउनमै विहान पदाधिकारी, पूर्व स्थायी समिति र राज्यसमितिका इन्चार्जहरुको वैठकले पारित गरेको थियो । उनले संविधानसभा चुनावपछि आयोजना हुने विशेष राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘नयाँ खालको कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण’का लागि संगठनात्मक सिद्धान्त तय गर्नेसमेत प्रस्ताबमा उल्लेख गरेका थिए ।
पार्टी उच्च स्रोतका अनुसार साउन ४ गते विहान बसेको पदाधिकारी वैठकमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीले पदाधिकारीबाट राजीनामा दिएका थिए र प्रचण्डले पर्ख र हेरको स्थितिमा उनीहरुको राजीनामालाई लिएका थिए ।
बन्दशत्र अघि आयोजित वैठकको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गत माघमा सम्पन्न हेटौंडा महाधिवेशनको कार्यदिशाले जनतामा विश्वास पैदा गरेको र अन्तराष्ट्र्रिय समुदायलाई सकारात्मक सन्देश दिएपनि संगठन मजबुत बनाउन नसकिएको टिप्पणि गरे । ‘हेटौंडाबाट दुश्मनको घेराबन्दी पनि तोडिएको हो’ प्रचण्डको भनाई थियो, ‘महाधिवेशनमा कार्यशैली र पार्टीको संगठनबारे पर्याप्त निर्णय गर्न नसकिएका कारण मिलाउनका लागि विस्तारित वैठक बोलाइएको हो ।’ उद्घाटनमा बोल्दै एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पदत्याग समस्या नभएर समाधान भएको बताएका थिए । ‘विगतमा विरोधीहरुले माओवादीलाई समस्या भन्थे, यसैगरी मेरो पदत्यागको घोÈणालाई पनि केहीले समस्याका रुपमा प्रचार गर्दैछन्’ भट्टराईले भने । आफ्नो पदत्यागले पार्टी एकतावद्ध हुने पनि उनको विश्वास छ । उद्घाटन शत्रमा अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।